Inona avy ireo fotoana Twitter ary ahoana ny famoronana ny anao | Vaovao momba ny gadget
Villamandos | | Tambajotra sosialy
Twitter Moments Na inona no itovizany, ny Moments of Twitter dia misy amin'ny mpampiasa Espaniola rehetra ao amin'ny tambajotra sosialy ary tonga ny fotoana hahafantarana ity fitaovana Twitter vaovao ity ary azo antoka fa ho hitanao teo amin'ny fikaonanao ny fotoana sasany. Ato amin'ity lahatsoratra ity, antenaina fa mahaliana, hampianatra anao izahay hamorona ny fotoananao manokana amin'ny fomba tsotra.
Amin'ity fampitaovana vaovao ity, izay efa hita tany Etazonia nandritra ny herintaona mahery, ny tambajotra sosialy miisa 140 dia te hitovy amin'ny Facebook. Ankoatr'izay, ny Twitter dia manohy manandrana manolotra safidy sy fiasa vaovao ho an'ireo mpampiasa, mba ho mavitrika hatrany izy ireo ary tsy handositra ireo karazana serivisy hafa.
1 Inona ny fotoana amin'ny Twitter?
2 Ahoana ny fomba hamoronana ny fotoana Twitter-nao
3 Safidio ireo bitsika tianao hiseho ao amin'ny Fotoananao
4 Amboary ny fotoana anaovanao
5 Alefaso izao ny fotoana Twitteranao na tahirizo rehefa avy eo
Inona ny fotoana amin'ny Twitter?
Twitter Moments dia a fampandehanana mahaliana izay natolotry ny Twitter ho an'ireo mpampiasa Espaniola rehetra ary ahafahantsika mamorona tantara, amin'ny alàlan'ny andiana sioka nofidianay.. Rehefa hitan'ny mpampiasa iray hafa ianao dia hahita tantara mifandraika, izay azo amboarina amin'ny hafatra an-tsoratra, sary na horonan-tsary.
Netflix, ohatra, dia iray amin'ireo mpampiasa malaza indrindra izay nanararaotra tombony lehibe tamin'ny Twitter Moments mba hampiroboroboana ny Narcos, andiany mitantara ny fiainan'ilay mpivarotra zava-mahadomelina Pablo Escobar.
Hajaina ve i Pablo Escobar?
Ahoana ny fomba hamoronana ny fotoana Twitter-nao
Mba hamoronana ny fotoana iainantsika dia tsy maintsy ampiasaintsika ny kinova tranokala Twitter ary indrisy fa azo ampiasaina izy io tsy misy amin'ireo rindranasa amin'ireo sehatra finday samihafa. Raha vantany vao manomboka ny fivoriana dia tsy maintsy miditra amin'ny alàlan'ny hafatrao sasany ianao na mampiasa ny takelaka Moments.
Amin'ny fampiasana ireo safidy ireo dia hiditra amin'ny pejy izay hanombohantsika hamorona ny Fotoantsika.
Safidio ireo bitsika tianao hiseho ao amin'ny Fotoananao
Raha miditra amin'ny Moments ianao amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo hafatrao, dia hiseho tampoka izy io, fa amin'ny fotoana rehetra dia azonao atao ny mamafa izany ary manampy hafa. Ilay rindranasa mihitsy dia hanome sosokevitra vitsivitsy izay ananantsika ao amin'ilay faritra "Tiako" ary azontsika atao ny mampiditra azy amin'ny famoronana antsika, na dia eo aza ny fanaraha-maso antsika amin'ny fotoana rehetra, ahafahantsika mampiditra izay tadiavintsika.
Plus koa azo atao ny mampiditra bitsika navoaka, na avy aminay na avy amin'ireo mpampiasa hafa. Mba hampidirana azy ireo dia mila mitady azy ireo fotsiny isika, misy zavatra mety manjary mandreraka indraindray.
Amboary ny fotoana anaovanao
Izay fotoana rehetra noforoninay tamin'ny alàlan'ny fitaovana natolotry ny Twitter ho anay, azo amboarina, manampy lohateny, famaritana fohy, izay toy ny saika ny zava-drehetra ao amin'ny tamba-jotra sosialy dia hanana litera voafetra ary koa sary sarony.
Aseho anao eto ambany ny sarin'ny takelaka iray izay ahafahanao mamorona ny Fotoana tadiavinao, na hizara azy ireo ampahibemaso na tsy miankina (azonao atao ny misafidy azy amin'ny menio "More" izay hita eo amin'ny zoro ambony ambony)
Alefaso izao ny fotoana Twitteranao na tahirizo rehefa avy eo
Izay fotoana rehetra inoanay azontsika atao ny mamoaka azy raha vantany vao vita ny fanovana azy na avelantsika any aoriana. Raha ny fisafidianana ny safidy faharoa dia ho voatahiry ho volavolan-dalàna io, toa izay mitranga amin'ireo bitsika hafa soratantsika fa tsy avoaka amin'izao fotoana izao.
Fitsapana fotoana fohy ao amin'ny Twitter ...
Twitter Moments na Moments amin'ny teny espaniola dia fitaovana tena mahaliana, indrindra raha te-hiaraka vondrona fitambarana hafatra navoaka tao amin'ny Twitter izahay ary hanome azy ireo famolavolana farany hita maso. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia miely loatra ny fampiasana azy eto amin'ny firenentsika, fa satria efa hitantsika ny fantsom-pahitalavitra sasany na ireo sehatra fandefasana horonantsary raha toa ka mampiasa izany izy ireo mba hampiroboroboana ny famoahana azy ireo.
Efa nasehonay anao ny iray amin'ireo Fotoananay izay noforoninay ho an'ity lahatsoratra ity ary tianay ianao hampiseho anay ny anao, hahita azy ireo ary ambonin'ny zavatra rehetra hianaranao zavatra vitsivitsy.
Nahavita namorona ny Fotoananao Twitter tamina fomba tsotra ve ianao noho ity fampianarana mahaliana natolotray anao androany ity?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tambajotra sosialy » Inona avy ireo fotoana Twitter ary ahoana ny famoronana ny anao
Tesla dia miantso antsika amin'ny hetsika amin'ny 17 sy 28 Oktobra